Londan oo nin Soomaaliyeed Xabsi daa’in lagu xukumay | KEYDMEDIA ONLINE
Londan oo nin Soomaaliyeed Xabsi daa’in lagu xukumay
LONDON(KEYDMEDIA) Maxkamad ku taala Dalka Britain ayaa xukun maxkamadeed muda dheer qaadan doona waxa ay ku riday nin Soomaaliyeed oo ku eedeesyan dilka arday Soomaali ah oo Dalkaasi wax ku baranayay.
Axmed Faarax oo ah ninka la xukumay da’diisuna lagu qiyaasay 25 sano jir ayaa waxaa lagu heystay oo lagu maxkamadeeyay dil uu 2006 –dii u geestay arday lagu magacaabi jiray Mahir Cismaan.
Mr Faarax iyo qaar ka mid ah saaxibadiis ayaa waxa ay socdaal u aadeen xaafad lagu magacaabo Camden oo uu ku noolaa Maahir oo ay tuhmeen inuu xiriir la leeyahay dhalinyaro afkaar ahaan ay isku kacsanaayeen Axmed iyo saaxibadii. sida uu sheegay Steven Lawrence oo ka mid ah saraakiisha sirdoonka.
Sanadkii tagay ayaa gacanta lagu dhigay Axmed isagoo isku dayay inuu dalka ka baxsado Canada-na uu tago, waxaana xogta danbigiisa la xiriirta maxkamadda ka saaciday Cadeymo laga helayo Camero ku dhaganeed goobta falka uu ka dhacay.